Chautari Daily » सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड , हे्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड , हे्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं ०७ असार / सुनको मूल्यले आइतबार नयाँ रेकर्ड राखेको छ । छापावाला सुन आइतबार प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
शुक्रबार प्रतितोला ८९ हजार ९ सयमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला सात सय रुपैयाँले बढेर कारोबार भइरहेको हो । त्यसैगरी आज तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार एक सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
शुक्रबार प्रतितोला ९ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रतितोला १० रुपैयाँले बढेर ९ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै शुक्रबारको तुलनामा आइतबार केही देशको विनिमयदर घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय २१ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय २२ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय २२ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय २३ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ ।
एक कतारी रियालको खरिददर ३३ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ५६ तोकिएको छ । त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै आज एक यूरोपियन यूरोको खरिददर १ सय ३६ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय ३६ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ। एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५० रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५१ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९५ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९७ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ । एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति ७ असार २०७७, आईतवार ०५:३६